Muzvare Khupe Vopika Kuti Ndivo Vari paNyanga muMDC-T, Kwete VaChamisa
Makakatanwa ekurwira chigaro cheanofanotungamira bato reMDC-T chakasiiwa nevaive mutungamiri webato iri, VaMorgan Tsvangirai, ari kutowedzera zvichitevera kubuda pachena kwemumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato iri, Muzvare Thokozane Khupe, vachiti ndivo vakafanobata chigaro ichi, sezvo vari mutevedzeri akasarudzwa nekongiresi yebato ravo muna 2014.
Muzvare Khupe vanoti izvi ndizvo zviri mubumbiro remitemo yebato ravo.
Vanoti vamwe vose vari kuzviti ndivo vakafanobata matomu vari kutaura zvemugotsi matsuro sezvo vari kunzvenga chokwadi, chinove bumbiro rebato.
Vachitaura kekutanga pamusoro penyaya iyi neStudio7, Muzvare Khupe vanoti vacharamba vachiremekedza bumbiro remitemo yebato ravo, asi vanofanirwa kujekesera nyika kuti ndivo vakafanobata chigaro chekutungamira bato zviri pamutemo.
Mashoko aMuzvare Thokozane Khupe
Ukuwo mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato, VaNelson Chamisa, vari kutiwo ndiwo vakafanobata chigaro ichi, zvichitevera kusarudzwa kwavo neNational Council yebato ravo.
VaChamisa, avo varamba kunzi mutevedzeri wemutungamiri vachida kunzi vakafanobata chigaro chemutungamiri, vanotiwo vanhu vari kuti Muzvare Khupe ndivo vakafanobata matomu vari kutadza kunzwisisa zvikamu zvebumbiro remitemo yebato iri.
Vanoti havadi kunyepera nyika kuti pakatyorwa bumbiro remitemo yebato, vachiti vanofamba nemutemo, uye ndomurawo zvaunotaura.
VaChamisa vanoti havadi zvavo kuti vange vachifukura hapwa vachiburitsa zviri mubato ravo, asi vanoti vachashevedzera musangano wechimbichimbi pamuzinda webato ravo weHarvest House kuti vagadzirisane nevamwe vavo pamusoro penyaya iyi.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti bumbiro remitemo reMDC-T rinoburitsa pachena kuti mutungamiri webato akasarudzwa nekongiresi, anotsiviwa nemutevedzeri wake mubato.
Izvi zvinoreva kuti munhu uyu anofanirwa kunge akasarudzwa nekongiresi panguva imwe cheteyo bato rakasarudza mutungamiri waro.
Kongiresi yeMDC-T yakaitwa muna 2014 iyo yakaona VaTsvangirai naMuzvare Khupe vachisarudzwa sevatungamiri vaviri vepamusoro mubato.
Mushure memakore maviri kongiresi yaitwa, VaTsvangirai vakadoma VaElias Mudzuri naVaNelson Chamisa kuti vave vatevedzeri vavo kuitira kuti vavabatsire mukufambisa basa munguva iyo vainetseka nehurwere.
Makakatanwa ehutungamiri mubato reMDC-T akatanga kuonekwa pakati paVaChamisa naVaMudzuri, asi kupindawo kwaMuzvare Khupe mudariro kwave kuita kuti makakatanwa aya akure.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi raVaMudzuri panyaya iyi.
Asi vamwe muMDC-T vari kuti kudomwa kwaVaChamisa kuri kunze kwebumbiro remitemo, vachiti panofanirwa kuitwa kongiresi yechimbichimbi yekusarudza mutungamiri mutsva.
VaTsvangirai, avo vakashaya neChitatu chapfuura kuSouth Africa, vavigwa neChipiri kumusha kwavo kwaHumanikwa, kuBuhera mudunhu reManicaland.